घरमा कुकुर पाल्नुभएको छ ? जान्नुहोस् १० टिप्स - Koshi Online
१ आफ्नो घरको कुकुरलाई आवश्यक कुरा आफैँ सिकाउनुहोस्, अरूलाई तालिम दिन लगाउनु खासै ठीक होइन । कुकुरलाई तालिम दिने अनुभवी व्यक्तिबाट कुकुरको तालिमबारे सिक्न सक्नुहुन्छ ।
आलुको बोरामा लुकाएर चरेस तस्करी गर्ने एक महिला समातिइन्
बलात्कारको भिडियो देखाएर पीडितसँगै पैसा मागेपछि घटना सार्वजनिक !
न्याय माग्दै धर्नामा बसेका निर्मलाका आमाबुवाको स्वास्थ्य अवस्था अझ बिग्रँदो